Akhbaarta wanaagsan ee Coronavaris …oo loo helay Talaal oo lagu tijaabinaayo Dadkii ugu horeeyey – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Akhbaarta wanaagsan ee Coronavaris …oo loo helay Talaal oo lagu tijaabinaayo Dadkii...
Akhbaarta wanaagsan ee Coronavaris …oo loo helay Talaal oo lagu tijaabinaayo Dadkii ugu horeeyey
Sarkaal Mareykan ah ayaa ku dhawaaqay in qiyaasta ugu horreysa ee suurogalka ah ee tallaalka cusub, “Covid-19”, in la soo saari doono, Isniinta, warka u wanaagsan adduunka oo dhan.
Sarkaalka, oo codsaday inaan magaciisa la shaacin, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in ka-qeybgalaha koowaad ee baaritaanka caafimaad uu heli doono tallaalka tijaabada ah Isniinta maxaa yeelay wali maxkamad lama shaacin lagumana dhawaaqin si caalami ah maadaama uu marayo Tijaabadii ugu horeysa.
Wuxuu sidoo kale tilmaamay in Machadyada Qaranka ee Caafimaadka ay maalgaliyeen tijaabadan lagu sameeyay xarun cilmi baaris oo ku taal Gobolka Washington, waqooyi-galbeed Mareykanka.
Waxaa xusid mudan, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dadweynaha, ansaxinta buuxda ee tallaal kasta oo suurtagal ah inay qaadaneyso hal illaa 18 bilood.
Ilaa hadda, fayraska ‘Coruna virus’ wuxuu diley qiyaastii 6,512 qof oo adduunka tan iyo markii uu dillaacay bishii Diseembar ee la soo dhaafay, iyo qiyaastii 16,9086 cudur ayaa laga diiwaan-galiyay 139 waddan iyo gobollada tan iyo markii uu cudurku billowday.
Si kastaba ha noqotee, tirada cudurka infekshannada si buuxda ugama turjunto runta, maaddaama shuruudaha tirakoobka cudurka loo adeegsado iyo baaritaanada ogaanshaha ee loo yaqaan ‘Covid-19) ay ku kala duwan yihiin waddanka.